Gobolka Catolonia ee Ka go’ay Spain oo sheegay inuu mardhow shaacin doono Madax banaanidiisa. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Gobolka Catolonia ee Ka go’ay Spain oo sheegay inuu mardhow shaacin doono Madax banaanidiisa.
On Oct 4, 2017 224 0
Iyadoo maalmihii lasoo dhaafay gobolka Catalonia ee katirsan dalka Spain lagu qabtey cod bixin ay qeyb galeen malaayiin Ruux oo gobolkas kasoo jeeda, taas oo ay dadku u codeynayeen iney noqon karaan dowlad Madax banaan iyo iney kasii mid ahaanayaan dalka Spain ayaa 99% dadka gobolkaas waxa u codeeyeen iney noqdaan dowlad madax banaan.
Gudoomiyaha gobolka Catalonia oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in maalmaha soo socoda gudahood uu ku dhawaaqi doono madax banaanida gobolkiisa, isagoona ugu baaqay ciidamada booliiska ee Spain iney isaga baxaan gobolkiisa.
Boqorka Spain oo warkan ka jawaabay ayaa ugu baaqay madaxda Catalonia iney ixtiraamaan dastuurka u yaala dalka, isagoona intaa ku daray in dalkiisa uu marayo taariikh adag.
Wuxuu ku hanjabay Filib Al-Saadis boqorka Spain in dowladiisu ay juhdi adag ku bixin doonto sidii Spain ay usii ahaan lahayd mid mid ah oo ay dimuqraadiyado maamusho, wuxuuna ugu baaqay dadka Catalonia iney fikradaha ay aaminsanyihiin ku difaacaan xeerarka dastuurka.
Gobolkan ayaa ahmiyad gaar ah u leh dowlada Spain marka laga hadlo dhanka dhaqaalaha iyo Istiraatiijiyadda, waxaana ku nool 16% dadka Reer Spain.
Spain iyo Burtuqiiska waa labo dal oo markii hore la isku oran jiray Andalus, waxaana ka dhisnaa 800 oo sano dowlado Islaami ah.